असल साथी कसरी बनाउँने र बन्ने ? - Khabar Break | Khabar Break
असल साथी कसरी बनाउँने र बन्ने ?
आजको सूचनाप्रविधिको संसारबारे जति नै तारिफ गरे पनि शायद कम नै हुन्छ । यसकै माध्यमबाट हामी आफन्त तथा साथीभाइहरुसँग अत्यन्तै सहज ढंगले कुराकानी गर्न सक्छौँ । तर पनि अहिलेका मानिसहरुको आपसी सम्बन्ध पहिले–पहिले जति हुन्थ्यो त्यो किसिमको प्रगाढ भने भएको पाइँदैन ।
तपाईंलाई थाहा हुनु पर्ने कुरा
कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट तथा फोनमा साथीसँग कुरा गर्दा हामीलाई आफुहरुको सम्बन्ध प्रगाढ भएको लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले साच्चै नै मोबाइल तथा इन्टरनेटका कारण मानिसहरुमा मित्रताको सम्बन्ध प्रगाढ बन्न नसकेकै हो त रु पक्कै पनि सम्बन्ध प्रगाढ नहुनुमा सूचना प्रविधिको केही न केही हात हुन्छ नै ।
पवित्र शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार एक सच्चा मित्र भाइभन्दा पनि माथिको सम्बन्धको हुन्छ । यस्तै साथी बनाउन चाहनु हुन्छ भने फोन तथा इन्टनेटमा कुराकानी गर्ने साथीका विषयमा आफैलाई यस किसिमका प्रश्न सोध्नुहोस्, जोसँग म कुराकानी गर्छु, उसँग त्यस्तो खास के छ रु उसले मेरो कुन कुरालाई बढी मन पराउँछ रु